सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन खुल्यो, नयाँ मापदण्ड लागू हुने « Khabarhub
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन खुल्यो, नयाँ मापदण्ड लागू हुने
काठमाडौं – सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नयाँ आवेदन खुलाएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण वैशाख १६ गतेदेखि रोकिएको आवदेन आजबाट खोलिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुसालका अनुसार सेवाग्राहीले आजबाटै अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसअघि पहिलो चरणको लकडाउनका कारण २०७६ चैत्रबाट बन्द भएको ट्रायलको कामलाई विभागले डिजिटल माध्यमबाट फारम भर्न मिल्ने गरी २०७७ पुस १४ गतेबाट खुलाएको थियो ।
यससँगै करिब ४ महिनापछि कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि गरिएको दोस्रो चरणको लकडाउनसँगै गत वैशाख १६ गतेबाट लाइसेन्सको काम बन्द भएको थियो ।
विभागकाअनुसार पुसदेखि वैशाखसम्म फारम भरेका झण्डै ६ लाख परीक्षार्थी ट्रायलको पर्खाइमा थिए । विभागले गत भदौ २० गतेबाट लाइसेन्स खुलाएसँगै अहिले परीक्षार्थीले धमाधम परीक्षा दिइरहेका छन् ।
‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अझैं दुई लाखबढी पुरानै सेवाग्राही छन् । त्यसका लागि केही समय अझै लाग्ला’ भुसालले खबरहबसँग भने, ‘बाहिरी जिल्लामा लगभग सकिएको छ । अब नयाँ आवेदन दिनेले एक महिनाभित्र परीक्षा दिन पाउनेछन् ।’
त्यस्तै विभागले गत साउनदेखि लागु हुने गरी लाइसेन्स परीक्षाका लागि नयाँ मापदण्डको व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपी लकडाउनका कारण परीक्षा रोकिएको थियो ।
यससँगै नयाँ आवेदन दिनेहरुले अब नयाँ मापदण्डअनुसार लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने भुसालले बताए ।
विभागबाट जारी निर्देशिकामा वर्ग ‘क’ (ए) मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ‘ख’ (बी) कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स लिने सहज व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाको दफा ५ (२) बमोजिम वर्ग (क÷ट), (ए÷के) र वर्ग ‘ख’ (बी) का लागि लिइने लिखित परीक्षाका लागि ५००÷५०० वटा प्रश्नको दुइटा प्रश्न संग्रहसमेत विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार लिखित परीक्षामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, ट्राफिक नियम पालना तथा सवारी साधनको प्राविधिक पक्ष सम्बन्धी सामान्य व्यवहारिक ज्ञानका विषय समेटी १०० पूर्णांकको प्रश्न सोधिनेछ । यसमा चार÷चार अंकका २५ वटा वस्तुगत उत्तर दिने प्रश्न हुन्छन् ।
लिखित परीक्षाको अवधि ३० मिनेटको हुनेछ । सम्बन्धित कार्यालयले विद्युतीय माध्यमबाटसमेत लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार परीक्षार्थीले ट्रायलमा ७० अंक ल्याए लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छन् ।
ट्रायलका लागि प्रयोग हुने मोटरसाइकल–स्कुटर पेट्रोलबाट चल्ने र कार, जिप, भ्यानहरू पेट्रोल, डिजेल वा ग्यासबाट चल्ने हुनुपर्नेछ । त्यस्तै सबै सवारी दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक भएको वा बहाल अवधि बाँकी रहेको तथा तेस्रो पक्ष बीमा भएको हुनुपर्नेछ ।
प्रयोगात्मक परीक्षा १०० पूर्णांकको हुनेछ ।
कुनमा कति अंक ?
घुमाउरो आठ– २० अंक
साँघुरो फलेक– १० अंक
युटर्न– १० अंक
बम्प्स (उबडखाबड)– १५ अंक
उकालो– २० अंक
यी गल्ती गरे ट्रायलमा अंक काटिन्छ :
घुमाउरो आठमा एक पटकसम्म अंकित रेखा छोएमा ५ अंक घट्ने छ ।
एक पटकसम्म खुट्टाले भुइँ टेकेमा थप ५ अंक घट्ने छ ।
युटर्नमा टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबाले १० अंक घट्ने छ ।
ट्राफिक संकेत पालना नगर्दा १५ अंक घट्ने छ ।
उबडखाबडमा एक पटकसम्म भुइँमा टेकेमा ५ अंक घट्ने छ ।
एक पटक सवारीको स्टार्ट बन्द भए ५ अंक घट्ने छ ।
सवारी चलाउनु अगाडि सवारीको ब्रेक, टायर र ऐनाहरूको सामान्य निरीक्षण गर्नुपर्नेछ । यसो नगरे ३ अंक घट्नेछ ।
हेलमेटको लक नलगाई सवारी चलाएमा ४ अंक घट्नेछ ।
असंयमित भएर सवारी चलाए ३ अंक घट्नेछ ।
प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७८, मंगलबार १२ : ४५ बजे